Arabia Saodita : Ny Fahafatesan’ny Printsy Mpandova Fanjakana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2012 3:11 GMT
Nambara fa maty omaly tany Geneve, Soisa ny Printsy mpandova fanjakana avy ao Arabia Saodita, 79 taona. Nayef bin Abdulaziz Al Saud, izay minisitry ny atitany fahavelony, no voatondro ho Printsy handova ny fanjakana taorian'ny nahafatesan'ny rahalahiny Printsy Sultan bin Abdulaziz valo volana lasa izay.
Ny 17 Jona no tonga ao amin'ny Fanjakana ny vatana mangatsiakan'ilay printsy mpandova. Natao tany Makkah ny vavaka fanao rehefa fotoam-pandevenana, taorian'ny vavaka maghreb (fanao rehefa mody masoandro).
Niteraka onjam-panehoan-kevitra maro teny anivon'ireo Saodiana mpiondana aterineto na tsia ilay fahafatesana, ka tanatin'izany no nanambaran'ny sasany ny alahelony ary ny hafa kosa ny hafaliany. Ireto ambany ireto ny sasany amun'ireny fanehoan-kevitra ireny.
Handry Am-Piadanana Anie Ianao
Ny Printsy Nayef nodimandry miresaka amin'ny Printsy Salman. Sary nozarain'i Haifaa Al Nasser ao amin'ny Twitter <a href='http://twitter.com/HaifaaALnasser'>@HaifaaALnasser</a>
@iAbdulmalik: Hitahy ny fanahinao anie Allah ary handry am-piadanana any an-danitra ianao
@hayagoogle: Tao anatin'ny taona iray monja no namoizan'ny Mpanjaka Abdullah ny roa tamin'ireo zanany lahy. Homba azy anie i Allah.
@abdullamz: Teo amin'ny androm-piainanao dia niantso ny firaisankinan'ny Golfa ianao, ary taorian'ny fahafatesanao dia miray ao anatin'ny alahelo izahay. Allah anie hanome fiadanana ho an'ny fanahinao ry Nayef
@GhadaG: Ny olona sasany dia manohy miresaka na dia any ambadiky ny fahafatesana aza. Fa alohan'ny hanatsiniany ireo sasany efa nodimandry koa, dia tokony izay vitany aloha no hataony jery todika
Tsia, Tsy Mivavaka Ho Azy Izahay!!
@aofaris: Mamela anay amin'ity fanomezam-boninahitra sy fanakianana ity. Efa maty izy izao!
@al_bara: Mba karazana tsy firaharahiana ny maha-olona sy fihatsarambelatsihy manakory re ity e? Isanandro dia zaza an'aliny no maty anaty fihetsika feno herisetra sy vonomoka nefa tsy misy olona mba miteny indraim-bava akory.. ary olona iray no maty.. dia manomboka mody mifendrofendro miteomany ny olona tahaka ny hoe mifarana miaraka amin'ny nahafateany koa ny fiainana!!
@RGH0DY: Fomba ahoana no ahafahanao mangataka amiko hahatsiaro izay toetra tsara mba nananany? Mbola mitohy hatrany ireo asan-devoliny na dia aty aorian'ny nahafatesany aza. ireny dia azonao jerena any anatin'ny fon'ireo reny rehetra, cvady sy zanaka lahy! Azafady aza manelongelina ahy amin'ny resaka perfecionnisme any. ary avelao aho hifampizara ny hafaliany amin'ireo rehetra voafonja!
Iza No Ho Printsy Vaovao Ho Mpandova Fanjakana?
Ao amin'ny Twitter, nanohy naminany izay mety ho printsy vaovao ho mpandova fanjakana ireo mpiondana aterineto :
@alabdulkarim0: Aza ilaozana manontany izay mety ho printsy mpandova fanjakana ho avy eo.. Ny tsara ataontsika dia ny manomboka mitaky ny zontsika. Io no hahamarin-toerana antsika kokoa.
@WaleedMjd: Taorian'ny nahafatesan'i Nayef, ary ny zava-misy ankehitriny ao amin'ny firenena izay itarafana ny firenena iray manontolo ho toy ny fianakaviana iray.. hokorotsaka ny firenena raha tsy hoe misy politikam-panavaozana ny lalampanorenana angaha.
@Mashi9a7: Ny Printsy Salman no azo antoka ho printsy manaraka eo amin'ny fandovàna, kanefa, be ireo fanendrena mitodika mankany amin'izay ho minisitry ny atitany.